Tadiom-pitiavana | 5
Nanantona moramora an'i Tojo i Malala sady nampiakatra ny tanany nanafosafo malefaka ny takolak'ity tovolahy izay toa ila tsy haha hetsika teo amin'ny toerany.
- "Tsikaritro daholo ireny fihetsikao rehetra ireny ry Tojo a" hoy izy " saingy tsy te handratra ny fonao aho dia naleoko niezaka nampandefitra ny tao anatiko tao. Sarotra be koa ny toerana misy ahy sy ny misy anao ka naleoko mihitsy tsy nohasarotina eh."
Ohatran'ny somary nikipikipy kely aloha ny mason'i Tojo vao namaly izy hoe:
- "Eny e! Azoko tsara koa ny toerana misy anao ry Malala saingy tsy nisakana ahy tsy hitempo fitiavana anao izany taorinan'iny fiarahantsika indray mandeha iny. Raha mba fantatrao mantsy fa tsy nahatombina amin'izay ataoko mihitsy aho any amin'izay ataoko rehetra any fa toa lasa aty aminao aty foana ny saiko. Asa inona no hanjo ahy rehefa lasa tokoa ianao rahampitso maraina."
- "Voasarika aminao aho ry Tojo, tsy haiko hoe nahoana saingy tsy afaka mampanantena na inona na inona anao ny amin'ny hoavy koa anefa aho. Manambady amanjanaka aho ary tsy misy miafina aminao daholo izany. Raha afaka manamboatra saina anefa ianao hoe tsy misy na inona na inona mamatotra antsika dia hampianariko "mitia" araka ilay teniko teo tokoa ianao androany." Sady nanantona akaiky dia akaiky an'i Tojo ihany i Malala.
Nibanjina tsara azy aloha i Tojo toa mandinika lalina ny zavatra henony teo vao namaly hoe:
- "Manantsafidy firy ve moa aho ry Malala fa izay kely foinao ho ahy dia raisiko antanandroa. Efa ela no namisavisako ny fotoana iarahako aminao indray. Ampianaro aho hitia sy hanome izay tadiavinao amiko na dia fantatro aza hoe mandalo fotsiny izany."
Vao tsy tapitra akory ny tenin'i Tojo dia tsy tratra fa efa nitohaka moramora teo amin'ny molony ny molotry i Malala. Aleo aho hanala ny foko amin'ity Tojo ity hoy izy tany antsainy tany mba hanala izay sorisoriko tamin'i Alexia anikeo maraina izay sady nampiakariny hitazona ny tarehan'i Tojo ny tanany anakiroa hanorohany azy tsara. Nangorintsina toy ireny nokasihin'ny herinaratra ireny ny vatan'i Tojo vao tsapany ny fofon'ainan'i Malala antomotra be teo amin'ny vava orony. Nankimpiny ny masony dia nakatony ny eritreriny ny amin'izay ho mety ho tohin'izao fahasambarana tsapany sahady izao. Lafatra sahady aho izany hoy izy tany antsainy tany. Ho Sambatra tokoa aho raha izao no iainako isan'andro sady naka tsirony ny oroka nomen'i Malala azy ihany izy. Nampetrany teo amin'ny valahan'i Malala ny tanana ankavanana sady nanafosafo moramora ilay ankanjo mena mahafatifaty sady nanarabatana teny amin'i Malala izy. Ny tanany ankavia moa amin'io namikitra teo amin'ny soroky Malala sady misintona ity farany hiraikitra tanteraka amin'ny vatany.
- "Ampianaro mitia aho Malala" hoy i Tojo " fa tena maty aminao ny momba ahy rehetra" sady manafosafo ny lamosin'ity vehivavy bikana sady tsara tarehy ihany izy. Nitsiky kely fotsiny i Malala sady toa nikaroka izay ho tenenina. Ela tokoa mantsy izay fotoana nanaovany firaisana farany izay ka tena tsapany mivaivay mihitsy ny tany anatiny tany vao naheno ny filahian'i Tojo nivoitra be teo amin'ny patalohany nidona tamin'ny vatany. Tsy ariny intsony nony avy eo fa avy hatrany dia nosafosafoiny. Nakimpin'i Tojo ny masony vao henonny tanan'i Malala manafosafo ny filahiany mihamihenjana aok'izany. Impiry moa izy any antrano no tsy mahita tory raha tsy mamisavisa ny niarahan'izy sy Malala sy milalao ny filahiany ary tsy mijanona raha tsy toa ny faniriany. Tsy nofinofy intsony izao iainako izao hoy izy tany antsainy tany fa tena izy. Aleo aho hianoka tsara ao anatin'ity hasambarana ity fa tena lafatra loatra izy izany. - "Tojo ah, ampidiro any anaty ankajoko ny tananao dia safosafoy ny tenako iray manontolo" hoy i Malala tamin'ny feo miangoty nony avy eo nanapaka ny eritreritry Tojo lasa lavitra. Vetivety foana no nanarahan'i Tojo ny baiko nomena azy nampidina ilay tadin'akanjo iray teo amin'ny soroka ankavian'i Malala. Toa nandalovan-tselatra ny tany andohany tany nahita ny tati-nono mainty misy dentelles manify nanaovan'i Malala somary nanangasanga.
- "Mila vahanao kely koa ny "fermeture" aoriana akia Tojo an" hoy i Malala nanomboka nikisinkisina toa tsy mahandry ity fahavotsan'ity tovolahy manoloana azy. Tsy nila natoro intsony i Tojo nony avy eo fa tonga dia natsofony moramora tany anaty akajon'i Malala izay somary miala ilany fotsiny ny tanany hanafosafoany ny lamosin'ity olon-tiany. Malefaka be toa ireny hodi-jaza menavava ireny no fahatsapan'i Tojo ny hoditry Malala. Manomboka miha taitra daholo ny tenany iray manontolo. Raha ny sitrapon'i Tojo dia avy hatrany dia ny hihiditra avy hatrany any anatin'i Malala no tiany saingy efa nivalo ny hanaraka izay tian'i Malala izy ka dia nanaraka ny onjany fotsiny teo aloha sady naka fafiny hatrany. Nandritra izay fotoana izay nanomboka namaha ny bokotra tsirairay tamin'ny lobaka teny amin'ny Tojo tamin'ny tanany ilany fotsiny i Malala. Tena efa havanana sady mailaka mihitsy ny anao vavy. Tsy ela akory dia nihanjaka nibaribary ny tratra sy ny kibon'i Tojo izay tena mbola hita fa anjakan'ny hatanorana tokoa. Nosafosafon'i Malala ny tratran i Tojo sady narahiny tsongotsongo madinika teo amin'ny lohanonony. Nahatsiaro ohatran'ny maharary mangitikitika mahafinaritra izany ny anao lahy. Vaovao taminy ny zavatra tsapany. Tsy aritry Tojo intsony nony farany fa nalainy ny tanan'ity vehivavy dia napetrany teo amin'ny fehi-kibony. Azon'i Malala ny tian'i Tojo atao ary dia novahany haingana. Vao nivaha ilay fehin-kimbo dia toa ny tsy teo no namahan'i Malala ny bokotra sy ny "fermeture" izay tena niziriziry nibotsinan'ny filahian'i Tojo tao anatiny. Tsy nihambahamba ny anao vavy fa tonga dia natsofony tany anaty silipo tany ny tanany hahatsapan'ity filahiana efa tena mijaridina dia mijaridina aok'izany. Notopazan'i Malala maso kely ny zavatra fihinin'ny tanany. Fahafinaretana no tsapany tany anatiny. Toa mibosesika ao andohany ny filana te hampiditra azy io haingana any anatiny mba hahazoany tsirony mafimafy kokoa. Tsaroany tampoka anefa fa te hanome fanafinaretana faran-tampony an'i Tojo izy ka dia naleony mody nosafosafoina moramora teo ihany aloha ilay izy. I Tojo moa nandritra izay fotoana izay efa tsindrin-daona mafy ery ka sady niezaka ny hampidina ny patalohany hilatsaka amin'ny tany. Tampoka teo, natosik'i Malala hitsilany teo amin'ny seza lava izy sady niondrika ny anao vavy tonga dia nandray tamin'ny tanany ankavanana ny filahian'i Tojo teo amin'ny fotony. Nanomboka nosafosafoiny moramora tamin'ny tananany ankavia amin'izay ny loha-filahian'i Tojo izay somary namoaka ranoka madio somary maditidity. Fantany fa tena efa vonona be ity tovolahy manoloana azy. Na dia izany aza anefa dia tiany hampiakarina miadana ny onjam-pahasambarana tsapan'izy roa. Nikipy i Tojo fa toa sambatra loatra ny tenany. Tsy misy zavatra hafa ilaiko intsony eto antany hoy ny eritreritra niserana tao anatin'ny sainy. Aiza intsony aho no hahita fahasambarana ohatran'izany. Raha mbola varimbariana teo tokoa i Tojo no henony ohatran'ny nisy hafanana izany nandrakotra ny filahiany. Nahirany kely ny masony sady niharina kely izy hijery. Nangalam-pijery tany aminy i Malala sady nitsiky no niverina nanohy nitsetsitra sady nileladelaka ny halavan'ny filahiany.
- " Tiako be Malala a. Maninoa kay aho no omeno fahasambarana be ohatran'izany? " hoy i Tojo ohatran'ny farimparim-peo tampoka teo. " Mijaly aho rehefa tsy eo intsony ianao" tadidiny tampoka angamba fa mandalo ihany anie ity fahafinaretana tsapany ity.
Natosiky Malala tamin'ny tanany ankavia hiverina hidaboka anefa ilay tratrany niezaka niarina kely hijery teo iny toa milaza aminy hoe adinoy any izany tebitebinao izany fa ankafihizo aloha izay omekoanao izao. Nakipin'i Tojo indray ny masony sady ohatran'ny naka toerana tsara izy hakany izany tena fafiny omen'ity vehivavy azy.
- "Malala a, ho votsitra eto anie ity raha omenao tsirony be eo aho eh"
- "An, an" hoy i Malala sady nihato kely izy naka aina. " mbola vao fiantombohany fotsiny izao fa amboary ny saina Tojo ah. Rehefa miaraka amiko tsy maika ny handefa izany mihitsy, azonao?" sady naveriny natohoka teo amin'ny loha filahian'i Tojo indray ny molony roa malefaka sady somary matevina kely ny amboniny. Nitsangana i Malala nony avy eo dia nosintominy hiaraka aminy koa i Tojo.
- "Esory daholo ny ankajoko" hoy izy " fa mangetaheta anao ny vatako iray manontolo". Niarina haingana ny tovolahy ary dia nampidina ilay tadin'ankanjo teo ankavanana sisa tavela. Izay no ela fa tonga dia nihanjaka ny tampany ambonin'i Malala. Bika tsy manam-paharoa no nanoloana an'i Tojo. Nono mivohitra henjana tsara toa tsy nampino azy voaafina anaty taty nono mainty manify no tsinjony mirongaronga miandry ny tananany sy ny molony hanafosafo. Tsy maintsy somary narahin'i Malala tanana kely anefa ilay ankanjo mena manara-batana nony tonga teo amin'ny valahany fa somary teritery vao tafa ala tanteraka. Toa tsy nino ny mason'i Tojo fa eo anoloany indray ilay vatana tsy ahatsiarovany ny eto ambonin'ny tany. Toa ny tsy teo no namahan'i Tojo ny hidin'ilay taty nono tao aoriana sy nampidinany ny silipo "string" mainty teny amin'i Malala. Nosintoniny hanatona azy akaiky indray ny vatan'i Malala. Henony ny hafanana manenika ity vehivavy efa ihanahan'ny filana te hiray. Nifanantona indray ny molotr'izy roa sady nifanakalo tsetsitra sy rora toa tsy mahatsiaro izay eto ambonin'ny tany. Toa nandeha hoazy fa tsy tsikaritry i Malala akory ny tanan'i Tojo nakeo anelakelapeny. Tian'i Tojo ery ny mahatsapa ireo volo madinika malefaka tsara aratra mandrakotra ny tampon'ny fivavian'ity vehivavy. Lafatra no tsapany. Nalefany niaka-nidina teo ny tanany nanafosafo. Nakasokasony teo amin'ilay kitso kely efa henjana dia henjana tokoa. Nampidininy lalindalina ambanimbany ny tanany nony avy eo ary tsapany fa efa tena mitsiranoka madity aoka izany ity vehivavy manoloana azy. Nandeha hoazy ny fihetsika rehetra avy eo satria vao nahatsapa ny tanan'i Tojo i Malala dia somary nisabaka toa mankasitraka ny fihetsiny sady nanome alalana azy hiditra lalindalina kokoa. Ny oroka sy ny safosafo amin'ny tanana ilany avy ifanakalozan'izy roa amin'io mandeha ihany moa ny tanany ilan'i Malala manafosafo ny filahian'i Tojo efa nandranoka be aok'izany. Nanomboka henon'i Tojo nihanafana hatrany ny fofon'aina mivoaka ny vava oron'i Malala. Henony mimenomenona moramora sady miangoty ao ampoto-tsofiny i Malala nony avy eo hoe:
- "Ndao hoany ampandriana fa tena tsy tantiko intsony izy izany!"
- "Sao dia tonga tampoka eo aloha ry Mahefa sy Alexia eh?" toa tafaverina tampoka teto ambonin'i tany i Tojo.
- "Ndao fotsiny ho'a, fa mbola ela be ireny vao mody eo " sady notaritiny ihany i Tojo hoany amin'ny efitranon'i Alexia.
- " F'angaha tsy efitr'i Alexia ity? " hoy i Tojo.
- "ka ny ankizy anie matory ao amin'ny efitro e. Ndao fa tsy maninoa io fa hamboariko tsara rehefa avy eo, ndao haingana Tojo a. Mijaly be aho" Tsy nahaleo dohika i Tojo dia nanaraka ambokony sady toa tsy foiny koa ny hatapaka izao zavatra iainany izao. Izay iafarany any hoy izy fa aleo aloha aho haka ny anjarako.
Vao tafiditra tao anaty efitranon'ii Alexia izy roa dia:
- " Andraso eo kely aho" hoy i Malala " fa haka serviette hataontsika lafika" sady lasa izy nanao dia maika nivoaka. Vetivety dia iny ny anao vavy nitondra ireny serviette lehibe famelatra rehefa mitanin'andro eo amin'ny torapasi-morondranomasina ireny. Novelariny teo amin'ny karipetra malefaka feno volovolony nameno ilay efitra ilay servieta ary avy hatrany izy dia nitsilany teo amboniny sady novelariny ny feny. Tsy naha hetsika aloha i Tojo nanoloana ity fihetsika feno fahasahiana be ity.
- " Avy Tojo a, " hoy i Malala sady nantsoiny tamin'ny fanondrony hanatona azy eo ambany ity tovolahy. Niondrika moramora i Tojo saika tonga dia hiakatra teo ambonin'i Malala. Tsy niteny anefa i Malala fa ny tanany fotsiny no napetrany teo amin'ny soroky Tojo sady natosiny mafimafy ohatran'ny nanakana an'ity farany. Azon'i Tojo ny zavatra tian'i Malala hatao rehefa avy eo ka avy hatrany dia nandohalika teo amin'ny fivavian'i Malala izy sady nanomboka nanoronoroka ireo volo malefaka nandrakotra ny tampon'ny zohim-pahasambaran'ity ramatoa tiany. Niezaka nitraka kely i Malala handinika ity tovolahy tanora dia tanora mahita fahafinaretana amin'ny vatany. Nalain'i Malala ny tanany roa rehefa avy eo dia napetrany teo amin'ny lohan'i Tojo sady toa manosika ny tarehan'i Tojo hitakosinkosina lalin-dalina teo amin'ireo molotra roa efa diboky ny hamandoana izy. Somary naditidity masirasira ny tsiro tsapan'i Tojo. Asa na impiry amin'izao no niainan'i Tojo ny zavatra toy izao fa dia tena safononoka ny hasambarany ny tenany. Naveziveziny hiaka-midina iny afovoan'ny molotry ny zohim-pahafinaretan'i Malala iny ny molony sy ny lelany. Henony Tojo mimenomenona moramora ny anao vavy. Nampidiriny tao ambavany sady notsetsafiny maharitraritra tsindraindray ilay kitso kely efa tena henjana dia henjana ka niainga hoazy ny maojan'ity vehivavy heniky ny fahafinaretana.
- "Tinao ve" hoy i Tojo naka toky.
- "Tiako be izany an fa ataovy foana ... avia amin'izay ianao miditra any anatiko fa tena te hahatsapa be anao aho" hoy i Malala niangoty be sady nosintoniny hiakatra ho eo antratrany i Tojo.
- "Tinao ny milelaka azy io?" hoy ihany i Malala nony avy eo sady norohany ity tovolahy.
Tsy niteny i Tojo fa ny lohany fotsiny no nahatony sady noraisiny tamin'ny tananany ankavia ny filahiany hitady ny zohim-pahasambaran'i Malala. ...Natosiny indray mandeha tampoka. Nisento lalina i Malala sady nanakimpy ny masony.
- "Omeo ahy izay tadiaviko Tojo a, midira lalina be any anatiko any ianao fa mijaly be ny tenako" hoy i Malala somary ohatran'ny mandry maso izany mijery an'i Tojo sahirana manosika miditra sy mivoaka any anatiny.
- "Malala, tiako be enao" hoy i Tojo. " Maninona kay aho no ampijalinao e. Mandalo fotsiny ve izao hasambarana tsapako izao,..." sady mipaompy ihany ny tovolahy toa efa somary efa mitsingevana eny amin'ny habakabaka ny fahatsapany ny tenany. Tsy miteny intsony anefa i Malala nandritra izay fotoana izay fa toa toeran-kafa mihitsy no misy ny sainy. Ny masony moa ohatran'ny niakatra toa ireny olona safotra ireny na dia mihiratra aza. Ny tanany mamikitra mafy safy mifindrafindra no ahatsapan'i Tojo fa mbola mahatsiaro tena ihany izy. Tsy ela taorian'izay. Nitroatra tampoka i Malala sady nikiakiaka toa tsy nahafehy tena intsony niteny hoe " Tsy tanako intsony Hery an, *&%#..." Ny tanany amin'io namikitra be tsy nisy ohatran'izany ny valahan'i Tojo sady toa manosika ny maojan'ity farany hiditra lalina any anatiny. Nanaitra an'i Tojo moa ity ojam-pahafinaretana nitosaka tampoka ity ka tsy tanany koa ny azy fa nibosesika avy any koa ny azy. Tsy tadidiny intsony izay toerana nisy azy nandritra izay fotoana izay fa heniky ny fahafinaretana faratampony ny tenany iray manontolo. Rian'aratra mitselatra no tsapany niainga tany antampon-dohany, nandalo ny lohaliny ka nipaka hatrany ampaladihany. Safononoka sady nihanona ny hasambarana izy roa. Mbola nitakisinkisina kely teo aloha izy roa naka aina tsara izay vao Nahiratr'i Malala ny masony sady nitsiky izy no nisento tokana nijery an'i Tojo toa tony dia tony mandinika azy.
- "Mahay mampianatra mitia be enao an " hoy izy mantsy an'i Malala toa miezaka manamboatra saina fa vita hatreo ny tsirom-pahasambarana hiarahany amin'ity vehivavy nambabo ny fony.
- " Mety mbola afaka miaraka aminao ve aho rehefa tonga any Dago na hoe tonga mamangy an'i Alexia sy Mahefa aty ianao?"
- " Tsy haiko," hoy i Malala " Aleo fa ho hitantsika eo ihany izany fa amin'izao aloha dia amboary ny sainao mba tsy hijalinao irery aty lavitra aty." Tsaroany Malala tampoka tamin'izay fotoana izay mantsy fa toa niantso ny anaran'i Hery izy tamin'ny fotoana nahatsapany ny faratampom-pahasambaran'ny nofo teo iny. Natahotra izy sao dia noratrainy ny fon'ity tovolahy manoloana azy ity.
- " 'Zao Tojo a, fantatro fa tia ahy ianao, tsy misy miafina aminao anefa ny fiainako. Tsy afaka mampanantena anao na inona na inona aho fa ny hitako mety aminao dia ny mitady sipa mety ahazonao fahafinaretana be ohatran'izay nomeko anao teo izay, zany an." Tsy niteny tsy nivolana i Tojo fa i Malala no nataony tsara jery aloha tao anatin'ny segondra vitsy.
- "Eny e, aleo fa hiezaka hanamboatra saina aho. Misaotra anao aho nanome izay azonao nomena ahy. Enga anie mba hahita izay hasoloko anao tokoa aho... fa iza aloha ilay hoe Hery nantsoinao tamin'ianao tonga teo iny e... Sipanao taloha?" Nitsiky somary menamenatra i Malala.
- " F'angaha henonao moa izy teo iny?" hoy izy namaly moramora sadaikatra.
- " Henoko tsara saingy tsy dia norahirahiako loatra fa tena efa antomotra be nananika ny faran-tapony ianao moa izaho koa nahita fafiny be dia navelako tany fotsiny"
- " Aza fady Tojo a. Rain'ireo zanako kely anakiroa ireo izany Hery izany, tiako be izy izay saingy tena tsy misy hevitra mihitsy ny aminay e. Aleo tsy ho tantaraiko anao fa manjary mampitombo ny problemanao aty fotsiny."
- " An, an, tantarao fa aza maka fanahy ahy eo fotsiny enao e. Liana mihitsy aho"
- " Ndao aloha hiala tato haingana " hoy i Malala sady niarina izy dia namboamboatra ny efitra sady namoha ny varavarana nidanadana.
- " Aleo sokafako kely mihitsy ity varavaran-kely ity mba idiran'ny rivotra madio sao de misy fofona hafahafa ato ka raikitra eo indray ny fanontaniana hoe fa ahoana..ndana ianao tonga d mankany amin'ny douche fa tratrako any. Efa hoavy koa angamba ry zareo izay fa mila mandeha amin'izay ianao." hoy ihany i Malala ohatran'ny maika tampoka teo. Nanaraka ambokony fotsiny i Tojo na dia nanitikitika ny sainy mafy aza ny hihaino ny antsipiriham-piainan'i Malala izay toa tsinjony fa feno mistery.
Niditra namonjy azy tao amin'ny efitrano fandroana i Malala nony avy dia niara nandro hainga izy roa.
- " Zao ilay izy Tojo a. Izaho efa manambady an'i Ratrema io no niaraka tamin' izay Hery izay aho. Ohatran'izao nataontsika izao mihitsy no niantombohany. Dia io hitanao io fa dia niteraka taminy aho. I Ratrema moa momba dia natsangany ny zaza. Sarotra be noho izany ny tena fandehany fa tsotsoriko aminao fotsiny ilay resaka. Ny hiverenan'ny zavatra izay niainako teo aloha no nahatonga ahy niahotra ny hiaraka taminao. Ianao moa nisisika be dia iny niarahantsika nanao teo iny ny tohiny hatramin'izao iresahantsika izao. Handeha aho rahampitso an. Dia tiako raha handinoinao tanteraka ny amiko. Efa nomeko anao izay notadiavinao dia amboary ny saina fa mino aho fa misy vehivavy afaka manome anao tsaratsara kokoa noho izay nomeko anao any ambadika any. Be koa ny zavatra miandry ahy any Dago ka ary an'isan'izany i Hery ka aleo ianao manamboatra saina raha ny amiko. Aza malahelo an." Sady norohan'i Malala moramora teo amin'ny molony indray i Tojo. Te hitomany mafy ny tovolahy nefa menatra ka dia niezaka ny nanamafy fo.
- "Misaotra Malala a. Azokazoko izao ny momba ny fiainanao. Aleo fa hiezaka aho ny hanamboatra ny saiko. Ny faniriako dia ny mba hijanonantsika ho mpinamana foana na dia aty lavitra aty aza aho. Mitady anao aho rehefa tonga any Dago na dia hiara hisotro ranomboakazo fotsiny ihany aza, sa ahoana?" Nisento kely i Malala naheno an'izay tenin'i Tojo izay. Toa tafita tany amin'ity farany ihany ny tiany hampitaina.
- " Ndao amin'izay hivoaka tato sao dia tratra eto sika ry Tojo kah! izay vao tena loza ...." hoy izy ohatran'ny nijaikojaiko nibitabitaka nivoaka ny efitrano fandroana.
Niakanjo haingana izy roa dia niverina tao amin'ny efitranon'i Alexia i Malala nanidy ilay varavaran-kely novohany teo. Efa tsy nahare fofona hafahafa intsony moa izy niditra ny varavarana avy nandro teo ka dia nilamina ny sainy fa tsy hahatsikaritra na inona na inona i Alexia raha miditra eo. Ohatran'ny vita koa angamba ny valifatiny tamin'ilay fahatsapana fihatahana nataon'i Alexia azy anikeo maraina rehefa avy nanaram-po tamin'ny filan'ny nofo tao amin'ny efitranon'i Alexia izy sy Tojo. Nivoaka ny efitrano izy nony avy eo dia nahita an'i Tojo efa tafa akanjo sady nanamboamboatra ny teo amin'ny seza lava nilalaovan'izy roa .
- " Izay Tojo a. Misaotra tamin'ny fanampiana rehetra, dia tafita amin'ny fianarana, dia mahazoa vady iadanana, dia ... ataovy fotsiny hoe vahiny teo amin'ny fiananao aho, dia teneno aho rehefa hoa vy any Dago ianao. ...mifanoratra mailaka eo ihany isika na henonao amin'i Mahefa sy Alexia eo ihany ny vaovao momba ahy." Sady norohany teo amin'ny molotra indray i Tojo no nofihinina mafy. Nifanakalo oroka kelikely teo izy roa dia hoy i Tojo niezaka nampahery tena nanoloana ity fakam-panahy mila handifotra azy hoe:
-" Aleo aho handeha amin'izay Malala fa tonga any CDG aho rahampitso manatitra anareo raha tsy sarotiny i Professeur."
- " Okay zany Tojo fa tsy hitako hoe inona moa no tokony hahasarotiny azy. Antsoy izy rahariva dia ho hitantsika eo e. Raha sanatria ka tsy mihaona intsony dia ireny efa noresahintsika ireny an." Sady naterin'i Malala teo ambaravarana i Tojo hivoaka ny trano.
Nisento fotsiny i Mahefa, nandrasany aloha i Alexia hanala ny fony teo an-tratrany. Tsy maintsy nanova resaka indray izy nony avy eo, fantany mantsy fa mafy loatra ny alahelo manjo an-janany.
- "Alexia an ! tsy tadidinao angaha fa androany ange ny fotoana hijerena ny toe-pahasalamanao any amin’ny hopitaly e! miomàna fa hateriko any ianao, rehefa vita ny fitiliana dia alefako fiarakaretsaka ianao miverina mody aty antrano."
- " Tena saika adinoko. Marina tokoa izany ry Dada," hoy i Alexia sady namafa ny ranomasony tamin’ny takolany izy. Aleo hiomana haingana aho dia mandeha isika e!"
Talohan’izay anefa teny an-dalana, tao anaty fiara nentin’i Tojo :
Tsy niteniteny mihitsy i Malala, mbola somary vonto ny fony tamin’ny fihetsik’i Alexia teo, tsy mba fanaon’i Alexia mihitsy ny toy ireny hoy izy. Tsapany ary hitany mivantana amin’izay ny fiovan’ity zaza natsangany nony injay nahalala ny marina momba an’i Mahefa izy.
Ny toerana haleha fotsiny moa no nanontaniany an’i Tojo, dia nitondra azy tany ity tovolahy. Izy mianadahy kely ao aoriana samy mipetraka anaty fitaizàna, finaritra ery mijery ny manodidina rakofan’ny ranomandry fotsy. I Malala amin’io maka toerana eo afovoan’izy dahy, zipo mena malama izay no nanaovany, mipetaka tsara amin’ny feny ny ravin-damba, sendra nitsipalotra fotsiny ny mason’i Tojo no nahatsikaritra izay raha nihemotra naka fitoerana tsara iny izy. Te-hiresaka mafy i Tojo, fa toa tsy sahy, moa i Malala koa toa manjetoka toa lasam-borona izany. Tsy aritry i Tojo intsony anefa nony ela ny ela:
- "Malala an!"
- " Ahoana?" hoy i Malala mody tsy rototra.
- "Misy mahatezitra anao angaha?"
- "shhhh……………, fa angaha ………….. ssshhhh, tsy idiranao izany!"
- "Teneno e! teneno raha misy manahirana anao?"
- "Efa handeha koa izahay telo mianaka izao, avy maka vola ato isika dia mankany amin’ny masoivohom-pitaterana anabakabaka hamandrika ny toerana hodinay."
- "Hay handeha ianareo?"
- "Efa ela mihitsy no niandrasako izay, fa izao vao tena lasa!"
Somary nalahelo kely i Tojo, toa hikopak’elatra ity namany nitsirian’ny fitiavany. Tsy afaka ny hitazona izy, tsy manan-jo ny handresy lahatra ihany koa, nitempotempo mafy ny fony tao anatin’ny fotoana vitsy, te-hanana fotoana lava hifankahitany bebe kokoa sy hanaposahany ilay fitiavana nangalarina tao anatin’ny fotoana fohy nefa niraikitra tao am-pony.
Saingy, handeha i Malala, fotoana fohy sisa, ary mety ho andro vitsy. Dia hivadika ho tantara ilay fiarahana maminy tsy ho hadinoiny mandrakizay.
- "Malala an ! itsy ilay masohivoho notadiavinao, tianao angaha ny hiarahako aminao any!"
- "Tsy maninona ka, andao, hidio ny fiara dia araho fotsiny aho."
Dia lasa izy efa-mianaka mianaka, niditra tao amin’ilay birao. Natao ny famandrihana toerana:
- "Arak’izay haingana indrindra," hoy i Malala.
- "Tsara vintana ianao madama raha izany, misy mpivady nanao fampihemorana ny diany, ka misy toerana ho an’olon-droa malalaka rahafakampitso maraina."
- "Tsara be izany," hoy i Malala, sady faly no nibitaka teo am-pitoerany.
- "Misaotra betsaka. Efa may ny hody mihitsy aho."
Nisento fotsiny i Tojo nandre izany rehetra izany, toa sary tsy adinony tao an-tsainy ilay nataony tamin’i Malala. Nefa dia hotapahina sahady ve? Lasalasam-borona ny tovolahy. Tsy azony intsony ilay fihetsiky Malala tato ho ato, toa tsy miraharaha azy, toa nanadino ilay fahasambarana nangalarina toa indray mipi-maso fotsiny. Raha tsy lasa nandehandeha eran’ny trano i Toky kely ka nodomin’i Malala izy vao taitra, nitsangana dia nisarika ity zazakely te-hilalao mafy ho eny amin-dreniny.
Vita ny famandrihana ny toerana rehetra, dia nitsangana i Malala, dia nanaraka koa ny tovolahy, nitrotro an’i Toky, lasa nivoaka ny efitra.
Izay vao hitan’i Tojo miramirana aok’izany ity Malala, toa velon-tsiky mihitsy aza, misoritra teny aminy ny hafaliana. Nefa i Tojo kosa tsy nahateny, tsy nahavolana. Zara izy raha nahateny hoe "handeha ho aiza indray isika?".
- "Mody ka," hoy i Malala, "rahariva isika angamba miantsena raha eken’i Mahefa, sy raha afaka koa ianao!" Nanainga hatoka koa i Tojo, tsy niteny.
Dia nangina aloha teny an-dalana, tsy aritr’i tojo intsony fa nalefany ny zava-maneno tao anaty fiara, sady naka horonam-peo misy ny raki-kiran’i Poopy izay ankafiziny tokoa izy, nandeha ny hira, samy nankafy koa izy ireo fa any an-tany lavitra rahateo moa, saika fandaharana avy any ivelany hatrany no narahina hatramin’izay. Nandeha amin’izay ilay hira miventso hoe :
« Raha handeha ianao izao,
Ka hilaozanao eto aho,
Raha avelanao irery,
Dia hangina aho tsy hiteny…………… »
« Fa ny ho aviko eny indrisy,
Hosaronako ilay tsiky,
Amin’izay tsy ho fantatrao »
Dia nihira i Tojo sady nampiaka-peo hoe :
« …..Tsy ataoko ho fantatrao,
ny ratram-poko ao…………….. »
Nihomehy fotsiny i Malala tao aoriana tao, tsy azony an-tsaina fa izy no iantefan’ilay hira. Dia hoy izy
- "fa angaha dia tena nisy olona nandratra ny fonao mihitsy tany ry Tojo," sady lokilokin’ny hehy ny anao vavy.
Somary nitodika aloha i Tojo, nijanona tsy nihira, ny fitaratra no somary nahodiny hifanandrify amin’ny mason’i Malala, nahenany ihany koa ny feo.
- "ppfff, ahatsiarovako zavatra maro izany hira izany, izay no ametrahako azy ato anaty fiara ato, fa fiainana izany ka atao ahoana e!"
- "Mba tantarao e! sao dia ianao kosa ary no nandeha dia lasa namaky fon’olona tany Dago tany?"
- "Tia olona izay tsy tia ahy akory aho, noraisiny ho sangisangy ilay fitiavako, nefa aho nanolotra ny foko manontolo ho azy."
- "Manomboka liana amin’izany tantaranao izany aho ko, tiako ho fantatra alohan’ny hiverenako any Dago ilay izy, marina ange izany ry Tojo e!"
- "Izaho koa no adala e ! tia olona efa manan-tompo, sady nodondominy ny lohany. Olona efa manam-bady, ny zanany menavava, tena adala mihitsy aho e !"
- "Fa iza izany vehivavy maha-potipotika anao izany e! tovolahy tahaka anao izao ve dia ….. "
Sady nitodika i Tojo no nijery mivantana an’i Malala……….
- "Fa noheverinao iza?"
- "Izaho ve? hoy i Malala sady nanondro ny tenany izy no nivandravandra be ! « Non ! c’est impossible ! ».Sangisangy fotsiny ange ireny nataontsika sy ianao ireny e ! ny fahitako fa ianao manana ny fiainanao dia tsy mety amintsika ny manohy. Naleoko niala tsotra izao."
- "Tsy tsapanao mihitsy izany ireny fihetsika marobe nataoko ireny, fanampiana samihafa, vonona hatrany rehefa irahina," hoy i Tojo namaly azy.
- "Tojo an ! ajanony etsy aloha ny fiara dia andao hiresaka isika."
Naka toerana teo anoloan’ilay fivarotana lehibe i Tojo, ny ankizy koa moa ireto efa renoky ny torimaso norotsirotsian’ny lalana, dia nifindra nankao aloha i Malala.
- "Andray ry Tojo, hay ve ka noraisinao ho tena izy ireny nataontsika ireny e! Averiko fa dia fiarahana tsotra fotsiny ange e! izaho aza nihevitra fa …………… "
- "Eto vao tsapako ny nenina nataoko ry Malala an ! tsy tokony ho nanao ireny aho, nataoko foana izay hifampiresahana aminao hanambarako ny ato am-poko, dia izao, nefa ianao handeha. Ary ora aza sisa no isaina."
Nahankin’i tojo tamin’ny fitaratra ny lohany. Nitsipalotra kely teny amin’i Malala fotsiny ny masony dia nifampijery izy roa.
Farany, nalefan’i Malala teny amin’ny takolany ny tanany, nanafosafo kely sady niteny hoe :
- "Azoko tsara Tojo an ! ary misaotra anao tokoa aho noho izany, tena manohina ny foko ny fihetsikao, nefa tsy maintsy mandeha aho, miandry ahy ny tanindrazako, miandry ahy koa ny vadiko. Tsy hoe tsy mitempo fitiavana anao mihitsy aho akory hatramin’izay fa……….".
Notapahin’i Malala ny teniny, tsaroany tsara ny fotoana tahaka izao, nataony tamin’i Hery, fantany ary tsapany ny fahadisoana nataony, ary fantany fa ratsy hatrany ny vokatry ny fihetsika tsy voahevitra nataony ka tsy tiany hodiavin’i Tojo indray.
Tsapany ho misy hafaliana any am-pony any, nefa misy fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe maninona ny tovolahy mbola tanora tahaka an-dry Hery sy Tojo no raiki-pitia aminy. Nandini-tena tao anatin’izay fotoana izay i Malala, kanefa notairin’i Tojo hoe :
- "fa…………. andrasako ny tohin’ny teninao Malala an!"
- "An !" hoy ity iray somary taitra, "fa inona no noteneniko teo?"
- "Hoy ianao hoe "tsy hoe tsy mitempo fitiavana anao mihitsy aho akory fa…… " dia notapahinao ny teninao."
- "Sarotra be izany Tojo an! manana ny ho avinao mamirapiratra ianao ka aza simbaina amin’izany."
- "Malala an ! tia anao aho. Mitalaho an-tanan-droa aho, mijanona aloha andro maromaro, mbola azo ovaina ny famandrihana teo, ampianaro mitia aho……… ampianaro mitia anao!"
Nanankin-doha fotsiny i Malala, nijery ny tafon’ny fiara, ny tanany roa no nasafony ny tarehiny.
- "Tojo an ! tsy aleo aloha mody isika handinihana izany rehetra izany. Savolaina be ny foko sy ny fanahiko mandre izany teninao izany. Azonao atao ny manatitra anay telo mianaka any an-trano?
Nijery an’izy mianadahy kely tao aoriana izy ireo, mbola matory fehizay, ny toeran’izy ireo koa mifatotra tsara, tsy misy atahorana. Dia lasa avy eo namonjy ny tranon’i Profesora Mahefa.
Teny an-dalana, ny tanan’i Tojo tsy niala teo amin’ny famindrana hafainganam-pandeha, dia iny koa ny tanan’i Malala ankavia namonjy ny azy, namatotra sy nanafosafo tamin’ny ratsan-tanany, dia noraisin’i Tojo koa, nampifandraisiny tamin’ny azy. Nifampijery kely izy roa, nifampita hafanana amin’ity andro mbola mamirifiry.
Eny e ! nifampita hafatra am-pitiavana ihany koa angamba.
Rehefa tafavoaka ny fiara izy rehetra, izy mianadahy amin’io mbola renoky ny torimaso tokoa, faly ery ny reniny mahita azy ireo mandry eo an-tratrany, norokorohany kely. I Tojo kosa mitondra ny entana rehetra. Niakatra ho any an-trano.
Teny an-dalan-tsara anefa, naneno ny findain’i Tojo.
- "Allo ! Tojo ! Profesora Mahefa ihany ity ry ise an!"
- "Eny tompoko ! izaho ihany, mihaino anao!"
- "Lasa niaraka aty amin’ny hopitaly izaho sy Alexia ka nohidinay ny trano, mbola eo akaikin’ise eo angaha i Mme Malalatiana?"
- "Eny tompoko!"
- "Hay, dia izao ary, amin’ny lakilen’ny fiara dia misy ihany koa ny lakilen’ny trano ka iny no amohan’ise ny varavarana rehefa tonga ao an-trano ianareo, sao mantsy mangatsiaka any ny zazakely ka ho loza, fa aiza ianareo io?"
- "Miakatra ny tohatra mihitsy izahay io, efa kely sisa dia ho tonga ao an-trano."
- "Omeo ahy ary i Malala e!"
- "eny ary!"
Dia natolotr’i Tojo ny finday, noraisin’i Malala.
- "Allo Malala an!"
- "Izao e! saika adinontsika fa hay moa androany i Alexia no miverina any amin’ny hopitaly hozaham-pahasalamana, vao ety an-dalana mihitsy izahay mianaka io. Ka sao dia gaga ianao hoe lasa aiza i Alexia fa niaraka izahay. Efa natoroko an’i Tojo teo ny lakilen’ny trano ka tonga dia midira fa sao mangatsiaka ny zazakely. Izay ! izay fa mbola mety ho elaela mihitsy izahay!"
- "voaray Mahefa an ! amin’ny firy izany ianareo no miverina?"
-" Mbola mety ho ela mihitsy, fa rehefa vita mantsy ilay fizaham-pahasalamana dia tiako mba ho hitan’i Alexia ny hopitaly fiasako e!"
- "Tsy maninona ary e ! efa hiditra ny trano koa izahay io.
- "Tompoko, tompoko, eny tompoko………" hoy i Malala tamin’ny tsikitsiky. "Ianao ity fatra-panaja an!"
- "Ka raisiko ho toy ny raiko mihitsy ange izy iny e!"
Nosokafana avy eo ny varavarana, dia niditra, nentina tany amin’ny efitranony ny ankizy kely, dia nitohy ny torimasony.
Dia hoy i Malala!
- "Aleo ianao mipetraka eto amin’ny fandraisam-bahiny fa hikarakara zavatra mafana ho anao aho, andraso eo an!"
- "Sao dia tokony ho ampiako ianao? tsy maninona ange e!"
- "an an an ! andraso eo mihitsy, ataoko izany ho fisaorana anao. Ny zazakely koa moa natory ka tsy sahirana mihitsy aho."
Sady lasa i Malala nankany an-dakozia, nikarakara sy nandefa ny fanaovan-dite; tsy hitan’i Tojo akory ny nifindrany tao amin’ny efitrano ilany fa variana namaky revio teo ambony latabatra izy. Afaka fahefatr’adiny, nivoaka ny vehivavy, mitondra ny ranon-dravim-boafotsy mafana.
Ny akanjony amin’io mena midorehitra manify dia manify. Akanjo tokana mampiseho ny bikan’i Malala amin’ny tena ankafizan’i Tojo azy. Ambony kely ny lohalika fotsiny ny moro-tongony, fa hita misoritra tsara ny fe sy ny amboniny rehetra. Tady kely no mitazona ny eny ambony, somary mirafitra telozoro ireo tako-nono roa, mivoitra tsara mampiseho ny hakantony.
Manaitra avy hatrany ny mijery azy. Tafatsangana mihitsy i Tojo raha nahita an’i Malala.
- "Non, mipetraha amin’ny toeranao teo ihany ry Tojo. Izaho no hikarakara anao androany." Sady somary natosiny i Tojo hipetraka dia narahiny koa.
- "Te hianatra mitia ahy ianao? ……………dia izaho izany no hampianatra anao!
Fa alohan’izay, sotroy aloha ity dité mafana ity, fa tiako hafanafana tahaka izay koa ianao.
Sady nitsiky i Malala no nijery an’i Tojo, ny maso manao fijery miangoty aoka izany………..
Tao anatin’ny fotoana indray mipi-maso Ratrema no tonga saina tampoka:
- "Manana ny zoko aho," hoy izy, "manana ny zoko hiantso ny mpisolo vava ahy. Tsy azonareo sambotsamborina tahaka ny mpangalatra aho. Zoko ny miantso ny mpisolo vava ahy izao dia izao."
- "Ianao ity ve rangahy mitapy an! efa olona tratra ambody omby izao ianao mangala-badin'olona ka hoe manana ny zoko aho, ..." hoy ny vadin’i Corine somary nohetanin-katezerana.
- "Manana ny zony tokoa izy," hoy ilay vaditany nanamafy, fa na izany aza, ny fahatratrarana azy dia midika fa azon’ ny polisy entina avy hatrany hanaovana fanadihadiana any amin’ ny kaomisaria izy. Zon’ny kosa araka izay voalazany ny miantso ny mpisolo-vava azy."
Tsy namaly intsony moa ny vadin'i Corine taorianan'izay fa dia niandry izay ho tohiny teo sisa. Ny masony amin'io mivandravandra any amin'ity vadiny mifokofoko mitomany.
Noraisin-dRatrema haingana ny telefaona, niantso avy hatrany ny mpisolo vava azy izy. Rehefa niresaka elaela teo izy dia nanaiky ihany i Ratrema ny ho entina any amin’ny kaomisaria fa any no ifanaovan’izy ireo fotoana. I Corine kosa amin’io mbola nitohy nitomany ihany. Ny manjamasony amin'izany rava daholo sady nitakosina tamin’ny tarehiny. Nofafafafana fotsiny no niafarany.
Afaka folo minitra, indreny ry zareo nivoaka ilay trano fitaratra be eo Ankorondrano misy ny biraon'i Ratrema. Nandray fiara dia nizotra nankany amin’ny kaomisaria teny Tsaralalana.
Natao ny fametrahana fitoriana, nalàna am-bavany ary samy niaiky ny heloka vitany ny tsirairay. Tonga avy eo ny mpisolo vava an-dRatrema, nanambara ny zony sy ny tokony hataony, ary nametraka ny onitra tokony haloany mba ahafahany mivoaka faran’izay haingana indrindra. Zony ihany koa ny hampitoetra ho tsiambaratelo izao zavatra mitranga izao mba tsy hiseho imasom-bahoaka.
Voaloa avokoa ny vola rehetra, dia nisaraka teo ry zareo, Ratrema niaraka tamin’ny mpisolo vavany, i Corine mivady kosa lasa nody.
Niverina tany amin'ny biraony indray aloha i Ratrema naka ny antontan-taratasy mbola tsy vita izay tokony entiny mody. Injay fa naneno ny finday. Noraisinay:
- "Malala an!" nisento fotsiny Ratrema
- "Eto ihany aho Malala an! manao ahoana ianareo rehetra any?"
- "Tsy misy maninona aloha hatramin’izao, vita ny fety, izahay salama tsara avokoa. Fa fantatrao ihany ny antony iantsoako. Ratrema an! efa te-hody mafy mihitsy ange aho izao e!"
- "Eny Malala an! tena fantatro mihitsy, fa manana olana goavana be mihitsy aho aty, mbola tohin’ilay olana tamin’izaho tany! Raha mba niaraka tamiko taty mantsy ianao, mety tsy ho tahaka izao mahazo ahy izao ny fitrangan-javatra, ny mason-dRatrema amin’io manganohano ihany."
- "Ratrema an! fa misy inona e?"
- "Omany ny entana amin’izay ry Malala an! aleo mody amin’izay ianareo fa malahelo ny zanako aho! Malahelo anareo rehetra."
Faly aok’izany i Malala nandre ny feon-dRatrema nitalaho taminy ny hodiany amin’izay. Tsy andriny intsony ny ahatongavan’ny andro maraina hanaovany ny famandrihana ny toerana hiverenany an-tanindrazana.
- "Ratrema an! tena tiako be mihitsy ianao ! tsy andriko intsony ny ahatongavako any hanampy anao! Izay chéri an!"
- "Izaho koa mbola tia anao foana ry Malalako," hoy Ratrema sady latsa-dranomaso no nanapaka ny antso.
Niondrika teo ambony birao izy sady nifokofoko nitomany, nidradradradra irery tsy nisy nandre. Nalahelo mafy ary nanenina tamin’izay nataony.
Tahaka ny akoholahy voakapoka Ratrema nandeha nody, ny antanam-botsitra ny nantenain-tsy azo. Tsy kivy anefa ny lehilahy, tsy maintsy hitako foana izay vahaolana amin’izao krizy mandalo amiko izao hoy izy nankahery tena.
Nalahelo mafy ny ankohonany izy, tsy lalim-paka tahaka izao ny fitiavany ireo zanany hatramin’izay, fa nony injay lavitra azy dia toa manembona mafy ny fony te-hahita azy ireo sambatra ery eo anilany.
Tany ampitan-dranomasina ny ampitson'io:
Endrika falifaly sady miramirana no nifohazan’i Malala tao am-pandriana, Nahavatra nifoha maraina mihitsy izy hiomana sahady handeha. Handeha ho aiza anefa?
Gaga izy raha nandalo ny lalantsara, nahita an’i Alexia nivoaka ny efitranon’i Mahefa, vao avy nifoha mihitsy.
- "Manao ahoana i Neny?"
- "Manao ahoana, natory tsara, fa angaha ity indry tao no natory," hoy Malala somary taitra.
- "Ie! tato amin’i Dada aho no natory tamin’ny alina…"
- "Fa nisy inona?" hoy i Malala sady nanokatra ny varavarana, hitany i Mahefa matory eo ambony seza lava, mitafy bodofotsy, ny fandriana kosa hita fa vao nialàn’i Alexia vao fotoana vitsy.
- "Fa inona koa ary ity mampisendaotra an’i Neny, ka tato aho no natory dia izay."
- "Fa angaha ity indry tsy manana ny efitranon-dry? sady notaritarihiny i Alexia hanaraka azy hidina ny tohatra, alazako amin-dRain-dry fa ataovy tsara, mitady hanararao-p…"
- "ssshhhhh, fa ity Neny ity ve adala e! inona ny fahadisoako amin’izany, ary i Neny izany ange manomboka miheritreritra zavatra hafa mihitsy e!"
- "Fa misy inona indray e!" hoy i Mahefa etsy ambony mitazana azy mianaka!
- "Fa inona no mahatonga an’i Alexia natory tao aminao, nefa ny efitranony malalaka?"
- "Ka tsy nandeha tsinona ny hafanana tao amin'ny efiny dia naleoko nafindra tao amiko izy no natory."
Tsy niteny i Malala, nangina fotsiny. Lasa izy nirintona tany an’efitra hafa. Toa menatra ihany nefa . Fotoana vitsy monja dia nivoaka indray…
- "Eny e ! tsy maninona izany, fa ianareo moa izany efa mifandray am-po tsara, dia ilazako fa handeha amin’izay izahay telo mianaka. Hamandrika ny toerana amin’izay aho rehefa avy eo! Ratrema mihitsy no niantso ahy mba hiverenako amin’izay. Halefany ny vatsy an-dalanay. Azoko atao ve ry Mahefa ny miantso an’i Tojo hiaraka amiko hikarakara ny famandrihantoerana androany?"
- "Ka maninona moa raha afaka izy", hoy i Mahefa.
Nangingina tsy nisy nifampiteny tao an-trano, i Malala toa manjetoka izany, tezitezitra fa asa mihitsy izay nahazo azy tampoka teo.
Nantsoiny tamin’ny telefaona i Tojo, avy koa dia nanaiky ny anao lahy.
Adim-pamantaran’ora iray dia tonga izy. Tsy be resaka fa dia andao fotsiny vao vita ny arahaba.
Nifampiresaka nilamina tamin'izay i Alexia sy Mahefa nony lasa kelilkey i Malala sy ny ankizy.
- "Dada an ! fa maninona kay i Neny no nanao toy ireny."
- "Ireny anaka no atao hoe fon-dreny, mitranga tahaka ireny izy indraindray. Ka naleoko tsy niteny mihitsy mba hanalàny ny fony."
- "Tsy azoko!" hoy i Alexia.
- "Malahelo izy satria amin’ny maha reny azy izay dia saro-piaro izy rehefa mandao azy ilay fitiavan’ny zanany azy. Tonga dia azoko avy hatrany izany teo, isika mianaka rahateo moa mifandray am-po be, dia mahatsiaro ho voailikilika izy, manirery ka nanaitra ny fony ianao natory tato amin’ny efitranoko tamin'ny alina, eny e ! misy fahadisoako ihany ilay izy, nefa tratry ny tampoka koa aho tamin’iny. Eny anaka, mbola ho tsapanao koa izany rehefa lehibe, rehefa…"
Notapahin’i Mahefa tampoka ny teniny, tsaroany fa i Alexia ange ka tsy afaka intsony ny hanana anaka na oviana na oviana satria efa nalàna taminy ny tranon-janany. Hadinony hatramin’izay izany fa dia faly sy nikorana tamin-janany foana no nataony. Navadiny haingana ny resaka:
- "Eny e! trangan-javatra mpiseho ireny fa andao hiresaka zavatra hafa isika mianaka."
- "Ohatran’ny mahatsiaro diso ihany aho ry Dada teo, hay izay tokoa ilay fon-dreny, tsy maintsy mbola ho tsapako izany rehefa lehibe ny zanako any aoriana any. Sa tsy izany ry Dada?"
Sanganehina fotsiny i Mahefa, tsy nahita havaly, hay izay resaka tranon-jaza zay mbola olana goavana mila vahana ! Tsy maintsy ho fantatr’i Alexia na ho ela na ho aingana ny tsy fahampiana aminy, ny toe-batany iray manontolo mihitsy no hiova ary tsy maintsy ho tsapany koa!
- "Alexia, zanako izany, tsy maninona ve raha hiresaka zavatra hafa isika mianaka?"
- "Resaka toy ny inona moa ry Dada!"
- "Asa, tsy mampaninona ve ny miresaka Hery?"
- "Hery, Hery, fa maninona no tian’i Dada horesahina ny momba azy."
- "Asa tokoa, fa aleo tonga dia tsoriko e! mahare izay anarana izay foana aho tato ho ato, ary tamin’ny alina ohatra dia « Hery » no nantsoitsoinao ka nanaitra ahy. Ka asa, ataoko angamba fa fotoana izao. Ny hany fantatro mantsy dia ny hoe fofombadianao hono izy ary efa vita fisehoana ianareo. Asa, mety malahelo azy angaha izany zanako izany?"
Nisento indray mandeha fotsiny i Alexia, dia nifampijery izy mianaka, nanomboka nanganohano ny masony.
- "Azafady izany zanako izany, sady nahankiny tamin’ny tratrany ny lohan-janany, nampalahelo anao indray aho!"
- "Tsy maninona izany Dada an! fotoana koa angamba izao!"
- "Fa angaha tsy afaka mifampiresaka ianareo?"
- "Tsy haiko intsony ! Tsy fantatro intsony koa, nanofy ratsy aho tamin’ny alina hoe nandao ahy ho any amin’ny mandrakizay izy, fa tao anaty nofy fotsiny. Izy nilatsaka tany anaty hantsana no taitra tampoka aho, iny niantsoatso nanaitra an’i Dada iny."
Tamin’izay no nanomboka nilatsaka ny ranomason’i Alexia.
- "Dada an ! misy manjo azy any lavitra any matoa aho manofy tahaka ireny. Ary ny laharan’ny findainy efa tsy miasa intsony ."
Nitomany i Alexia, nanafosafo ny lohany no mba azon’i Mahefa natao.
- "Tsapako mihitsy izany anaka, tena tsapako tokoa, tadidio fa efa niaina ny mafy tahaka izany tokoa aho, indraindray aho taloha, nanofy mihitsy hoe nianjera teny amoron-tevana i Vololona, izaho no nitaty azy avy ety ambany, indraindray nanofy hoe : nofaon’ny fiara izahay….. mafy koa anaka ny nentiko nandritra ny roapolo taona mahery izao, fa dia indro ianao eto anilako eto, tony ny foko manana anao, ka aza malahelo intsony ny fonao fa eto foana aho izany zanako izany."
- "Eny e!" hoy ihany i Alexia mifokofoko, ekeko tokoa ny teninao, fa manana ray azoko itokisana aho, nefa tsy mety afaka ato an-tsaiko ilay fijeriny farany ahy tao anaty nofiko.
Nisento fotsiny i Mahefa, nandrasany aloha i Alexia hanala ny fony teo an-tratrany.
Naka rivotra teny amoron-tevana i Alexia sy Hery tamin’io harivariva io. Na dia nisy soratra aza teo nandrara azy ireo fa tsy azo ipetrapetrahana dia toa tsy nahasakana azy roa ny hankafy ny tsio-drivotra malefaka sy ny hakanton'ny tanàna tazany tery ambany izany.
Nony tafapetraka anefa dia samy nangina tsy nisy niteny izy roa. Toa samy mandinika ny ho aviny angamba, na koa nisaintsaina lalina ny fiainany avy sy izay vita hatrizay. Nitsangana tampoka i Alexia nony avy eo sady niteny tamin’i Hery hoe:
- "Hery an ! efa tena mangatsiaka aho, tsy aleo ve mody amin’izay isika?"
Tsy niteny i Hery fa nibanjina azy fotsiny aloha…
- "Tsy maninona," hoy izy, "andao ary hody fa na izaho koa aza mahatsiaro mangatsiaka aty amin’ny lamosiko aty!…"
Raha nitsangana iny anefa i Hery dia nibolisatra tampoka ary nikorisa nankeo amin’ilay moron-tevana. Ny tanany sisa no namikitra tamin’ny sisin-bato. Ny vatany efa mikiraviravy any amin’ny hantsana; Taitra sady nikoropaka i Alexia niezaka namonjy ity olon-tiany sady niantsoantso hoe:
- "Hery an ! omeo ahy ny tananao, haingana…"
Tsy afa-nanoatra i Hery, ho latsaka ihany izy raha vao manala ny tanany amin’ilay vato namikirany. Ny fony midobodoboka mafy aoka izany, tsy sahy nitodika nijery izay taoriany.
- "Hery, samboriko avy eto ny tananao… Hery an ! matahotra aho."
Raha iny nisambotra ilay tanan’i Hery iny i Alexia, no avy hatrany dia nihongotra teo amin’ny toerany ilay vato namikiran’i Hery teo, nikoropaka izay tsy izy iry roa, nifampisintona, niezaka ny hifamatotra mafy amin’ny tanany.
- "Hery an ! mavesatra be…. Mila tsy ho zakako, maharary ahy ny tanako ! Hery an !!!"
- "Alexia an ! maty aho fa aza avelanao, aza avotsotra fa mamikitra mafy aminao aho."
Tsy nanahetsika aloha izy roa nandritra ny fotoana fohy, nefa ny fisinton’ny hozatra amin’io tsapa niha-mavesatra sy manaintaina ihany.
- "Hery an ! maharary be ny soroko, mila tsy ho tantiko intsony ! Hery an!..." sady nanomboka nangovitra ny feon'i Alexia.
- "Andraso aloha Alexia! hiezaka hamikitra amin’itsy vato itsy aho," hoy i Hery nanomboka nangovitra ihany koa.
Tsy nanantsafidy i Hery fa avy hatrany dia nanala ny tanany ilany tamin’i Alexia ary dia niantsampy tamin’ilay vato teo akaikiny...Azony ihany, namikirany, nefa vao nizaka ny lanjany rehetra ity vato iray hafa ity dia niongotra ihany koa. Tsy nisy azon'i Hery natao intsony fa dia nianjera tamin'ilay tevana izy.
- " Maty aho Alexia, maty aho, vonjeo aho Alexia a..."
- "Hery !!! nnnoooooooooonnnnnnnnnn ! aza mandao ahy ianao ! aza avelanao irery ety ambony ety, sady nikiakiaky nitomany mafy izy niantso ny anaran'i Hery. Niezaka nanarangarana ilay tevana nianjeran'i Hery izy saingy toa maizina ny fahintany ny manondidina azy. Tsy mampino hoy izy tany antsainy fa dia maty ilay olontiany. "inona no hataoko Andriamanitro o!" hoy ihany i Alexia nidradradradra nitomany sady niezaka niala hiakatra hamonjy ilay lalan-kely teo ambony.
Taitra izy ary tafarina tampoka. Gaga izy fa eo ambony fandriana ny tenany fa tsy teny amoron-tevana akory. Teo vao tsapany fa hay nanonofy ratsy ny tenany. Ny zavatra tsy fantany anefa dia fotoana fohy talohan'ny nifohazany teo no nitrangan'ny lozam-piarakodia tamin'i Hery aty Madagasikara. Nahatsiaro nangatsiaka aok’izany izy ary dia nanamboamboatra ny lamba norakofany. Nampirehetiny ny jiro, nojereny ny manodidina azy. Niverina nandry moramora indray izy nony avy eo sady nisaintsaina lalina ity nofy ratsiny.
- "Hery, fa nisy inona, inona ny fambaran’iny nofy iny. Misy manjo azy ve any?"
Tamin’izay fotoana izay indrindra no novoahain’i Mahefa ny varavarany. Asa na naheno zavatra na nanao ahoana izy tany amin'ny efitra fatoriany tany. Nirehitra rahateo koa moa ny jiro tao amin'i efitranon'i Alexia ka tsy naharitra izy fa nanontany anjanany:
- "Fa maninona ianao anaka, ary toa mangatsiaka be ato aminao izany? tsy mandeha angaha itsy fitaovana itsy?"
tsy niteny i Alexia fa toa varimbariana izany na dia mitopy tany amin-drainy aza ny masony. Ndao hatory any amiko hoy izy tamin'ity zanany vavy fa mangatsiaka be ato aminao izany sady nosintoniny moramora hiarina teo ampandriana i Alexia.
-"Dada an ! mangatsiaka aho, nanofy ratsy be aho teo dia izay no nahataitra ahy!"
- " Efa fantatro mihitsy anaka fa nisy zavatra nahazo anao dia izay no nahataitra ahy. Henoko nikikiaka sady niantsoantso anaran’olona ianao teo,..."
- " Anaran'iza no henonao? Hoy i Alexia
- " Tsy dia henoko mazava tsara ilay izy fa ny kiakikanao no tena nanako tao antsofiko fa Aleo aloha aho hanao rano mafana vetivety ho sotroinao." Sady nivadika nankany an-dakozia nanomana rano mafana tamin'ny vata famanana hosotroin'i Alexia izy.
Lasa fisainana irery teo i Alexia nandinika ny zavatra niainany tao anaty nofy. Dia sanatria ve hoy izy ka misy zavatra manjo an'i Hery any lavitra any e?.
Na dia tsy nivaky fa naheno ny Anaran'i Hery aza i Mahefa dia lasa ihany koa ny sainy sady nanontany tena fa dia inona loatra no manjo ity zanany ary iza loatra izao "Hery" tafititra any anaty nofin-janany izao. Iza ary hoy izy no azoko hanontaniana momba ity Hery ity. Ny zanako ve ? sa i Malala ?
Tany amin'ny hopitaly nisy an'i Hery aty Antananarivo:
- "Tahiana an ! mifohaza amin’izay fa efa maraina ny andro!"
hoy i Fano nibitsibitsika teo amin’ny sofiny.
- "Fa amin’ny firy izao?"
- "Efa amin’ny fito sady norohany tamin’ny takolaka ihany ity olon-tiany."
- "Tsy nahita tory mihitsy aho raha tsy efa nadiva haraina ny andro."
- "Nitondra sakafo maraina ho anao aho, ahoana, nanao ahoana nedala io?
- "Tsy nisy niova aloha, fa mbola tsy dia misy ahiana raha izao."
Tamin’izay no niditra ny efitra i Mihary sy ilay dokotera mpandidy maso. Nijery sy nizaha ity marary mbola tsy mahatsiaro na inona na inona.
Natao aloha ny fifampiarahabàna sy ny fifankafantarana, avy eo nivoaka ny efitra i Fano, mody niala teo imason’ny olona rehetra, asa, mety maro loatra koa angamba ny olona tao ka naleony nivoaka.
Nosokafan’ilay dokotera ny mason’i Hery, notarafiny….
Naka fanafody tao anaty kitapony izy dia nahosony teo ivelan’ny tata-maso. Avy eo norarahany fanafody mitete goty vitsivitsy tao anatiny. Nandrasany kely dia nojereny sady notarafiny indray.
- "Mbola tsy mahatsiaro tena izy ka fanafody hampitony ny fanaintainany fotsiny aloha iny nataoko iny. Izy ihany moa no ahafantarantsika izay manjo azy, fa manomboka izao dia aleo saronana lamba mainty ny masony sao dia tsy tantiny ny hazavana be rehefa mihiratra eo izy!
Izay Dr Mihary, antsoinao indray aho rehefa mahatsiaro tena tsara ny marary."
- "Misaotra Dokotera!" hoy i Mihary namaly moramora.
Tsy te-hanontany zavatra hafa aloha i Mihary, ilay dokotera rahateo mbola manana ny asany izay mbola sahaniny any amin’ny sampan-draharaha hafa ka teny an-dalantsara izy no nifampiresaka izay tokony hatao sy izay mitranga marina.
Vao lasa i Mihary sy ilay Dokotera, iny i Fano niditra sady nanontany an’i Tahiana:
- "Nanao ahoana?"
- "Nanao ahoana ahoana moa? hoy i Tahiana somary nanjetoka. Fa ny tsy azoko ry Fano dia izao, ianao ange no tena havany akaiky! nefa maninona ianao no ohatran'ny mialangalana izany. Tsy hita indraindray, lasa tampoka, tsy tamàna ato mihitsy. Toa tsy taitra akory ianao nilazako fa tratran’ny lozam-pifamoivozana i Hery."
- "Tsss ! ianao koa! raha nialangalana aho ve dia hiverina eto amin’izao!"
- "Ka izay indrindra, angaha izy manana havana intsony, tsy ray, tsy reny, ianao izao no mba havany akaiky, tsssss, tsy azoko indraindray. Izahay ange ka namany fotsiny e!"
- "Namany fotsiny an!……….. raha izany tokoa moa…………… i Hery, i Hery foana, i Hery hatrany no ambetin-dresakao hatramin’izay niarahantsika, fa inona marina ny ny fifandraisanareo e! Ianao milaza fa naman’ny rafozan’i Hery, nefa omaly alina, ny zana-drahavavinao milaza fa olon-tiany i Hery, nefa ange i Hery efa vita fisehoana amin’i Alexia e! Izaho mihitsy aza nanatrika tamin’iny fotoana iny. Izaho aloha tsy mahalala izay tantarany an!
- "Ka izay mihitsy, tsy fantatrao izay tantara marina. Fa ity ianao miala tampoka no loza, nefa dia havanao akaiky."
- "Ahatsiarovako tantara ratsy foana ny tahaka izao, dia izay no mahatonga ahy tsy miroboka lalina, ianareo koa moa mazoto dia avelako hikarakara azy tsara, ary isaorako anareo be dia be! Fa na izany aza, sarotra ny manadino ny tantara nitranga rahafa raikitra ao am-po tsy afaka mihitsy ary nitondra takaitra teo amin’ny fiainako."
- "Fa tantara inona indray izany," hoy i Tahiana somary sadaikatra.
- "Tsiambaratelon’ny fianakaviana izany, ary tsy hambarako mihitsy fa mankarary fo fotsiny…"
Tsy nifampiteny intsony izy roa, nangina ny efitrano. Ny sakafo moa no noloarana hihinanan’ity mpiandry marary. Ary afaka fotoana elaela….
Injay fa niverina niditra tao i Mihary, niverina niaraka tamin’ny dokotera hafa. Tsy tapitra teo akory ilay disadisa kely tamin’i Fano sy Tahiana, fa mody nifampianjonanjona tsy nifampiteny aloha…..
- "Izy no dokotera hikarakara an’i Hery amin’izay, hoy i Mihary, fa izaho moa nanavotra aina no nataoko, sady diso toerana rahateo i Hery ato amin’ity efitra ity fa entina any amin’ny sampan-draharaha tokony hisy azy amin’izay izy.
Mody nitsaitsaika hivoaka indray i Fano, fa tonga dia nosintomin’i Tahiana tamin’ny tanany hijanona sady nivandravandrany!
- "Efa ho avy any ny mpitsabo mpanampy rehetra hitondra ny marary, hafindra any amin’ny rihana ambony mihitsy izy izao," hoy ilay dokotera teo…
Tamin’izay indrindra anefa no nihetsika kely ny ratsan-tanan’i Hery, avy eo toa nimonomonona feo malefaka izy hoe :
- "Alexia ! … ampio aho…… avia Alexia…"
Nikoropaka i Mihary nijery azy, i Tahiana koa nitsamboatra mihitsy teo amin’ny seza nipetrahany. Nefa tsy nitohy intsony ilay fiteny, nangina indray ny iray trano.
- "Tsy Tonton Fano izao no hijanona hiandry ny marary? aleo angamba izahay sy Tahiana hody aloha … efa io ny Dokotera hanampy anao amin’izay ilaina rehetra."
- "Eny tompoko," hoy i Fano tsy naka sarotra, sorisorena koa natsoin’i Mihary hoe « tonton »
Iny fa lasa nivoaka ny efitra izy mirahavavy mianaka. Vao teo amin’ny lalan-tsara anefa dia hoy i Mihary :
- "Tahiana an ! tsy azoko atao ny mijery fotsiny amin’izao fa vao mahatsiaro tena eo i Hery dia tsy maintsy Alexia no hany hotadiaviny."
- "Fa ahoana?" hoy ny iray.
- "Izay fotsiny e ! fantatro avokoa ange ny tantara rehetra e! Fantatro fa manana ny laharana ahafahana miantso azy indry fa tsy te-hanome an’i Hery fotsiny. Izany foana no ambetin-dresany tamiko."
- "Ka misy antony ao, tsy tiako mihitsy ny handratrana ny fony rehefa any aoriana."
- "Azoko tsara izany, fa miangavy an-dry mihitsy aho mba omeo azy izay laharana izay rehefa ary saina tsara izy. Te-handeha izy, dia aleo alefa handeha. Aleo omena azy izay tadiaviny."
- "Ka efa hoe…"
- "Aza asiana izany Tahiana an! raha misy ny zavatra tadiavin’i Hery voalohany dia i Alexia! ka tsy mampaninona izay mety hitranga fa omeo azy re! miangavy an-tanan-droa mihitsy aho!
- "Dia ahoana anefa ny amin-dry, tsy vao alina ve i indry no nilaza fa tian-dry izy? Hoy i Tahiana somary nanao fijery miahotra.
Nisento fotsiny i Mihary, tafajanona tamin’ny toerana nisy azy mihitsy izy, nefa nandefitra amin’ity rahavavin-dreniny. Naleony tsy niteny. Naka poketra tao amin’ny birao fotsiny i Mihary dia niaraka nivoaka ny lalan-tsara izy mirahavavy mianaka.
Vao hivoaka ny vavahadin’ny hopitaly anefa, injay fa nisy fiara nampaneno ny anjomara tao aorian’izy ireo :
- "Dr Mihary. Andeha ho aiza ianareo izany? Ndao hateriko?
- "an, an, an, efa nivonona ny handray fiarakaretsaka etsy izahay fa tsy maninona Dr Harinaivo an!"
- "Tena tsy olana amiko mihitsy ka, afaka ateriko ianareo, jereo ange ny masonareo e! vizana dia vizana, hita mihitsy fa tsy nopoizinin-tory."
Nitsiky fotsiny i Mihary, somary menamenatra. Ka atao ahoana moa, ny maso no tsy mahay mandainga indrindra amin’ny tenan’ny olombelona fa hita taratra eo avokoa ny fihetsikao rehetra ; mbola saika handà ihany i Mihary nefa nodomin’i Tahiana tamin’ny sorony, dia nanaiky niditra tsy zazoka tao anatin'ilay fiara. I Mihary no teo aloha, i Tahiana kosa naka afovoany tao aoriana.
- "Dr Harianaivo an ! ity rahavavin-dreniko ity mbola tsy maintsy mandalo atsy amin’ny farmasia atsy fa haka fialan-tsasatra kely no hampilaza ihany koa, ka tsy mampaninona anao ve ny mandalo any?"
- " Tsy mampaninona mihitsy ka! Fa hono ho’aho, fa inonareo tokoa moa io tra-pahavoazana io ry zareo?"
Asa izay nahazo an’i Tahiana fa saika izy no hisolantsolana hiteny avy hatrany saingy ny an'i Mihary no tonga aloha nanao hoe:
- "Havana akaiky izy io ka! zana-drahalahin’ilay Mr.Fano teo izy ary ho vadin’izato ramatoa ato aoriantsika ato. Moa izy rahateo mpiara-mianatra tamiko tamin’ny mbola kely!"
Tsy niteny i Tahiana fa ny masony no navandravandrany tamin'’i Mihary izay nangalam-pijery kely tany aminy fotsiny.
- "Hay ve?", hoy ilay dokotera,…"eny e ! mafy avokoa rehetra tratran’ny tahaka izao, fa ny anareo moa ry zareo havana, sady efa andalam-pahatsaràna rahateo koa. Fa ny ahy tamin’izany……… ssshhhh, efa lasa izany fa tsy afaka averina intsony."
- "Fa inona moa izany Dokotera?"
- …ny ahy, efa fofom-badiko teo am-panomanana raharaha izahay no tratry ny lozam-piarakodia koa. Tsy tonga tany amin’ny hopitaly akory dia nafoy ny ainy. Efa nofo mangatsiaka no novantaniko tany amin’ny hopitaly. Raha mba teo aho mantsy tamin’izay… mbola mety ho avotra ihany ... sshhh, efa lasa ho’aho izany, tsy saintsainina intsony. Efa ho 3 taona lasa angamba izay."
- "Mampalahelo izany tantaranao izany dokotera. Miala tsiny raha nampahatsiaro ny fiainanao ny tranga aminay fa atao ahoana moa, izay ilay fiainana."
- "Dokotera an!" hoy i Tahiana, efa tsy ilay farmasia iasako ka tsy maninona fa apetrakareo fotsiny aho sady mety ho elaela koa. Misaotra betsaka nanatitra ahy taty."
Vao nijanona ny fiara dia nanolotra ny tanany i Tahiana, nifanao veloma.
Lasa avy eo Dr Harinaivo sy Dr Mihary nanohy ny diany.
- "Ary ianao hono mbola tsy manambady? azafady fa lasa tampoka ny vavako!
Menamenatra fotsiny i Mihary.
- "Fa ahoana no nahafantaranao izany"
- "Nalaza be tao amin’ny hopitaly mihitsy ange ny fiverenanao an-tanindrazana e! izao sy izao, hono ny mikasika izany, manam-pahaizana be nikoizana mihitsy fa na ny amerikana aza efa nandokiroky hampijanona azy tany…"
Tsy nisy niditra tamin’ny sain’i Mihary izay noresahin’ity namany dokotera, ny fahavizanany koa moa nanefika azy, moa ity olana mianjady amin’i Hery mbola babeny ao an-damosiny. Toa nanenina ihany anefa izy ny tsy nilazàny fa olon-tiany ange i Hery. "olon-tiako tokoa ve?" hoy izy niteny anankampo.
Rehefa tonga teo akaiki’ny tranony ny fiara dia nolazain’i Mihary fotsiny hoe :
- "itsy ny tranonay fa misaotra betsaka Dr Harinaivo an!, misaotra betsaka nisahirana tamiko. Mandra-pihaona fa antsoiko ianao raha vao tokony hijery an’i Hery" Niala ny fiara izy, nandeha moramora, niditra ny trano, ny reniny no hitany tao an-dakozia.
- "Neny an ! tena torovana tanteraka aho, sady napetrany ny poketrany…….. hiakatra any amin’ny efitranoko aho an ! hatory aloha ? misy zavatra azo hohanina angaha?"
- "ndana ary aloha maka aina izany zanako izany fa ateriko any ny dité mafana hosotrin-dry."
Vao tonga tao amin’ny efitranony izy dia nidaboka teo ambony fandriana. Nanganohano ny masony, niraraka tsimoramora ny ranomasony sady tsy tanany intsony fa nifokofoko nitomany izy.
Akory ny hatairany raha nahita an’i Mihary nitanondrika teo ambony biraony. Sady mifokofoko mila hitomany raha vao nahita azy roa…
- "Mihary an ! fa maninona indry ity e ! Fa naninona i Hery?"
- "Snif,…. snif," hoy ihany i Mihary nifokofoko. Tsy nahateny tsy nahavolana.
Nitsangana izy dia nataony baiko moana fotsiny izy roa hanaraka azy. Ny masony amin’io mila ho mena fefiky ny ranomaso.
Nidobodoboka mafy ny fon’i Tahiana nanaraka avy ato aoriana. I Fano koa, manahy ihany, toa tsy mandry saina amin’ity zavatra mitranga. Tsy vita akory ny fifankahalalàna fa toa mandeha mafy ny fandehan-javatra.
Tsy nisy nifampiresaka teny an-dalantsara fa samy hankona avokoa izy telo mianaka, nosokafan’i Mihary moramora ilay varavarana. I Hery matory eo ambony fandriana sady feno platira ny tratrany iray manontolo ary ny tongony mihantona ambony filanjana no hitan'i Tahiana sy Fano nanoloana azy ireo. Ny tarehiny amin'io voabandy tsy ahitàna afatsy ny masony sy ny orony ihany koa, sady misy fantsona mitondra ny rivotra iainany.
Tsy nahajery i Mihary fa nipitrapitra teo fotsiny ny masony.
Ankona tanteraka i Tahiana nahita an'i Hery tsy mbola mahatsiaro tena. I Fano moa toa tsy sahy nanatona mivantana izany fa toa mafy loatra taminy ny nahita ny zava niseho.
Nosintomin’i Tahiana avy eo ity zana-drahavaviny hivoaka ny efitra:
- "Mihary an ! fa nisy inona e?"
- "snif… tsy tantiko ny mahita azy tahaka izao, ny mahagaga ahy tamin’izaho tany Amerika, mbola misy aza ny loza mahatsiravina kokoa noho izao, navotana ny aina fa tsy tana. Fa ny mahita ny olona tianao tratran’izany toa mampisamboaravoara ny fo sy ny saina ; nitomany foana aho hatramin’ny nampidirana azy tato."
- "Fa nisy inona Mihary an ! taiza no nitrangan’ny loza?"
- "Lozam-pifamoivozana be teo amin’ny araben’ny fahaleovan-tena tamin’ny hariva teo,"
- "an, an, an… Tahiana an! tsy ho tantiko ny hitantara azy" sady nipatrapatraka indray ny ranomasony. Efa tsy nitempo efa ho minitra iray ny fony, fa nanao izay fara-herinay izahay dia avotra ihany ny ainy, fa na izany aza…mbola tsy fantatra izay akon’izay, ny fahitako azy…. mety tsy ho afaka mahita intsony i Hery,…. Rahampitso ny dokotera mpandidy maso no hijery azy, efa nifampiantso teo izahay!"
- "Tahiana an ! mila tsy ho tantiko intsony marina e!"
Nahankin’i Tahiana teo amin’ny sorony ny lohan’i Mihary, nampahery sady nanafosafo. Na izy koa aza toa manganohano hatrany ny masony, nahatsiaro ireo nataony tamin’i Hery fotoana vitsy lasa izay.
Tsapany koa ny fitiavan’i Mihary ity tovolahy ity, azony an-tsaina ny halalin’izany, toa faly ihany izy any am-pony, nefa toa sahirana ihany koa. .......
Tany amin'i biraon'i Ratrema talohan’io fotoana io.
- "Ratrema an!" hoy i Corine taminy, vola be tokoa aloha no tadiavintsika hanavotana an’ialahy e! dia raha avotra tokoa ary ialahy, dia inona no tambiny mba atolotr’ialahy ahy aorian’izany?"
Gina tsy nahateny Ratrema, mody niolankolana teo ambony seza teo izy, nodinihany tsara i Corine.
- "ka inona moa, inona ny azoko omena fa dia hisy ampaham-bola amboniny atolotro anao!"
- "ampaham-bola amin’ny ahoana ary, ny vola tadiavina aza letsy mila hanao ezaka tsy omby tratra vao azo ka ho ampaham-bola inona ary no heverin’ialahy. Fa angaha misy fahagagana ataontsika eo ! Ny tanjona fotsiny dia ny hahatratrarana ilay mari-bola, ary tadidio fa mandalo kirizy ange isika mianakavy amin’izao e ! Lasa iny ny fety, ny tranga iraisam-pirenena amin’ity fiakaran’ny vidin-tsolika manginy fotsiny. Mitandrema ihany letsy Ratrema an! Tadidio fa na dia mahita io vola io aza isika tsy midika izany fa tafita!"
- "Ka inona ary ny tianao homeko anao e!" hoy i Ratrema somary nisendoatra kely.
- "Ny angatahiko fotsiny, ataovy izay hahatamàna ny vadin’ialahy any an-dafy any, fa raha miverina aty iny dia tsy maintsy hanakorontan-javatra indray."
- "Eny e ! anjarako ny mandamina izany, fa izy aloha tena mibabababa mihitsy fa tsy tamàna fa dia ezahiko foana ny hampitony azy."
- "Tadidio fa efa ho afera maizina mihitsy ny ataontsika sy ialahy, arahi-maso tsara ny ao aoriana mba tsy ho tratra, noho izany, mitandrina foana na inona na inona atao."
Toa mila ho kivy sy ketraka Ratrema, nangina sady tsy niteny izy aloha nisaintsina izay zavatra nolazain'i Corine. Tena sarotra ity raharaha ity hoy izy fa tena mbola tsy sendra olana tahaka izao aho.
Tsikaritry i Corine fa toa lasa fisainana ny anao lahy ka dia nitsangna nijoro tao aoriany izy sady nanotra malefaka ny sorony sao mba hanamaivana ny adin-tsainy.
Nampidininy hanaraka ny tratrany avy eo sady namahy ny bokotra sy nisintona ny kiravaty hiala. Avy eo norohany tamin’ny takolany sady nolazainy hoe:
- "Tsy fantatr’ialahy mihitsy ny faniriako hahazo fahafinaretana amin’izao taom-baovao izao an!"
- "Io indray ianao Corine ! fa angaha dia tena misy filàna mipololotra mihitsy ao anatinao ao e!"
- "Ka izay mihitsy, tsy fantatro fa nony injay niha-lehibe aho, sady rehefa niaraka tamin’ialahy vao tena tsapako ilay izy letsy an!" sady norokorohany ihany ny takolak’i Ratrema avy ao aoriana ao. Avy eo izy nipetraka teo ambony ny latabatry ny birao indray, somary nakisany moramora ireo antontan-taratasy nanelingelina azy, dia naka toerana izy.
Nalàny ilay ambonin’akanjo, natsipiny, novahàny koa ilay lobaka manify hampiseho ireto tati-nono, avy eo ny tanany nalefany teny amin’ny saokan-dRatrema. Nanafosafo ny tarehiny dia niala vetivety naningotra ilay akanjo teny aminy. Avy eo namaha ilay tadi-nono avy any aoriana. Natsipiny tamin’ny tany ihany koa!
- "Ratrema an, avia letsy an ! tena efa mangidihidy mihitsy aho tampoka teo."
Sady nosokafany ny feny no nakariny ny zipony ho eo ambony lohaliny.
- "Esory letsy io atin’akanjo io an ! Ratrema chéri !…" hoy ity vehivavy amin’ny feo miangotingoty sady manainga ny fitombenany eo ambonin’ny birao….
Nahita ilay atin’akanjo maramara tarafin’ny hazavana koa Ratrema dia nanomboka taitra ny filahiany, nisy faniriana tampoka nandalo taminy, ny nonon’ity vehivavy rahateo tena mahavariana, sady amin’ilay hitiavany azy tsara. Adinony teo izay fitiavany an’i Malala, boky hafa feno sary no mivelatra eo anoloany. Te-handà izy fa tsy sahy. Te-hanaiky koa anefa toa miahotra. Farany, nalefany teny amin’ny fen’i Corine ny tanany roa, nasitriny tany nikaroka ilay atin’akanjo, dia nosarihiny hiala avy eo. Vao nandalo teo amin’ny feny dia napetrak’i Corine amin’izay ny fitombenany, ningainy ny tongony sady nakambany hialan’ity atin’akanjo.
- "Ouii ! tena manaitaitra ahy mihitsy ny alàna silipo tahaka ireny," hoy ity vehivavy sady nitsangana nanoloana an-dRatrema no namaha ilay zipo hany akanjo farany teny aminy.
Nalatsany iny dia nitanjaka tanteraka izy, avy eo natsangany koa Ratrema hanalany ny akanjony, novahany ny lobaka teny amin-dRatrema, ny orokoroka amin’io mandeha ihany, nifamihina mafy, oroka lavareny tsy misy farany.
- "Avia amin’izay letsy an ! avia fa tena mitady an’ialahy mihitsy aho"
Tsy hay nafenina fa dia niridiridy ny filahian-dRatrema. Tsy nila natao « contre-attaque » intsony fa tonga dia nitselatselatra ary velona avy hatrany ny maotera. Efa mibontsina izay tsy izy ny patalohany, nalàny haingana ny fehikibony, novahany ny bokotry ny patalohany.
I Corine etsy efa mitsilany eo ambony birao, sady hoy izy :
- "Avia fa tena mahafinaritra ahy mihitsy ity biraon’ialahy ity. Avia letsy an! avia fa tena efa mangoritsina mihitsy aho miandry ny an’ialahy!"
Tsy niteny i Ratrema, efa mandondona azy rahateo ny filàna te hiray amin'ity nofo nivelatra eo anatrehany. Noraisiny aloha ny tongotr’i Corine, norokorohany nidina ny fe, nandalo ny sisiny dia niakatra teo amin’ny kibony. Teo vao notsapainy ilay fivaviana efa mando aok’izany, tsapany avy hatrany ilay hafanana mila handoro mivoaka avy tao narahin’ny hamandoana mameno tampoka ilay faritra. Nokitikitihany mora, narahiny safosafo manaitaitra hatrany ity filàna mila tsy ho zaka.
- "tena tiako be, raha mba ataon’ny vadiko tahaka izao aho dia tena faly mihitsy… avia letsy Ratrema an!"
- "tonga dia alefako mihitsy ity fa sao tsy tanako intsony ry Corine an!"
Niarina haingana i Corine, nifanoroka aloha izy roa, dia nidaboka teo ambony latabatra indray ity vehivavy niandry izay ataon’ity sakaizany azy. Nasafosafon'i Ratrema moramora teo amin'ny molotry ny fivavian'i Corine aloha ny filahiany. Natsofony avy hatrany raha vao henony fa efa mando tsara vonony ny handray azy…
- "oohhhh," hoy i Corine tamin'ny feo miangoty naheno ny filahian'i Ratrema miha manenika ny vatany. "Annnn ! tena lafatra, ataovy mafimafy letsy Ratrema an!!"
Naka fihiny tokoa Ratrema, tena amin’ilay itiavany azy ilay fitoeran’i Corine ka tamana ery ny anao lahy, nanosika niditra sy nisintona hiverina...
Nivoha tampoka anefa ny varavarana, tsy noheverin’izy roa fa hisy olona any ivelan’ny birao satria i Mme Sahondra sekretera moa efa ela no lasa nody sady ny andro koa efa niha maizina tany ivelany. Hatairana ny azy roa. Indro niditra nivatravatra avy hatrany lehilahy telo. Avy hatrany dia nitabataba ny iray:
- "tratra ireto, tratrako ihany! hitanao tsara izao Maître ny fanitsakitsahana ahy, ary porofo mivantana mitohoka amin’ny tendany mihitsy!... Ary i tena ry Corine, ela nitoratorahana ka nahavoa mason’angatra, ny mpamosavy mandeha alina aza misy mpahita ka ianao indray ve!" Sady nalain’ilay vadiny ny poketrany, nosokafany ary nongotany tao ilay micro kely nafeniny antsokosoko tao anatiny.
Nikoropaka izay tsy izy Ratrema niala teo amin'i Corine sady nitsimpoka ny fitafiany izay voarambiny niparitaka tamin'ny tany. I Corine tsy nahahetsika sady tsy nahita ho tenenina fa nivaloarika. - "Hametraka fitoriana aho izao dia izao. Ary fantatro ny lalàna, ka anjaranao Monsieur l’Inspecteur ny mampihatra izany, ampidiro violon ilay mpangala-badin’olona io, ary i tena ry ilay mpamosavy ity dia hahita izany tsy manana na inona na inona izany intsony. Vita hatreo ny amintsika!"
- "Mifona tompoko ô! tena mifona e! hoy Ratrema nandadilady. Tsy nampoiziko e!"
- " Tsy nampoiziko, tsy nampoiziko inona Rangahy ity an! vita hatreo ny aminao. Mba olon-dehibe manan-kaja nefa hay tontakely mpangala-badin’olona."
Nitomany i Corine sady niezaka nitsimpona ny akanjony fa sady nahatsiaro menatra loatra izy no toa maizina tampoka taminy ny tany aman-danitra.